बिहीबार नेप्से परिसूचक २५.८२ अंकले उकालो, ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार | News Polar
बिहीबार नेप्से परिसूचक २५.८२ अंकले उकालो, ४ अर्बभन्दा बढीको कारोबार
यस दिन एनसीसी बैंकको सर्वाधिक हिस्सा
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक २५.८२ अंकले उकालो लागेको छ । यस दिन १ प्रतिशतले बढेर २ हजार ६११.१० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । बिहीबार नेप्से इन्डेक्स पनि ३.९१ अंकले बढेको छ । यस दिन ०.८४ प्रतिशतले बढेर ४ सय ६९.०२ विन्दुमा पुगेर इन्डेक्स बन्द भएको छ ।
आजको शेयर कारोबार रू. ४ अर्ब ३५ करोड ७० लाख १९ हजार बराबरको ९८ लाख १८ हजार ४६ कित्ता भएको छ । आज २ हजार ६०१.२१ विन्दुदेखि खुला भएको बजार २ हजार ५९८ विन्दुसम्म झरेको थियो । यो दिन कुल कारोबारमा सर्वाधिक रकमको हिस्सा एनसीसी बैंकले ओगटेको छ । उक्त कम्पनीको रू. ३० करोड ९६ लाख ९४ हजार बराबरको शेयर कारोबर भएको हो । सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको यो दिन एनसीसी बैंकको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १२ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३५२ कायम भएको छ ।
२१७ ओटा कम्पनीको ५० हजार ६७३ पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यसदिन होटल्स तथा पर्यटन समूह र लगानी समूहको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ । यो दिन व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.४८ प्रतिशत बढेको छ भने जलविद्युत् समूहको ३.४८ प्रतिशत बढेको छ ।
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको बिहीबार धितोपत्र बजारमा दोस्रो कारोबार दिन रहेको छ । पहिलो कारोबार दिन ७.८४ प्रतिशत बढेको उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य बिहीबार उच्च दरमा बढेको हो ।
बिहीबार महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेको छ भने विशाल बजार कम्पनीको ९.९९ प्रतिशत बढेको छ । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिकित्ता रू. २८४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३ हजार १२५ र सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको प्रतिकित्ता रू. ३३ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३६३ पुगेको हो ।
त्यस्तै, बैंकिङ्गको ०.४३ प्रतिशत, विकास बैंकको ०.९८ प्रतिशत, वित्तको ०.४२ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ०.९८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १.८४ प्रतिशत बढेको छ । यसैगरी अन्यको २.५४ प्रतिशत, लघुवित्तको ०.८६ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको ०.८५ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको ०.०९ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
यसदिन श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको २.८२ प्रतिशत र नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको शेयरमूल्य २.३० प्रतिशत घटेको छ । श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. ७ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २४१ र नेपाल हाइड्रो डेभलोपरको प्रतिकित्ता रू. ८ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३४० कायम भएको हो ।
उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाका कारण शेयर कारोबारका लागि अनलाईन कारोबार प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । बजार सम्बद्ध निकायहरुले अनलाईन कारोबार र रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने लगानीकर्ताहरुलाई कारोबार नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित : बैशाख १६, २०७८, १७:३९:५५
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको लिलामी शेयरमा आवेदनको लागि आज अन्तिम दिन
मंगलबार नेप्से परिसूचक ९२.४६ अंक बढेर २ हजार ५९९.०७ विन्दुमा
साताको पहिलो दिन नेप्से ७५.७९ अंकले घट्यो, होटल्स तथा पर्यटन समूह बाहेक सबै ओरालो
बुधबार नेप्से परिसूचक ३२.४१ अंकले घटेर २ हजार ६३२.२० विन्दुमा, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सर्वाधिक कारोबार